अब कोभिड अस्पतालले ननकोभिड सेवा सञ्चालन गर्नैपर्ने : RajdhaniDaily.com -
Home Breaking News अब कोभिड अस्पतालले ननकोभिड सेवा सञ्चालन गर्नैपर्ने
अब कोभिड अस्पतालले ननकोभिड सेवा सञ्चालन गर्नैपर्ने
काठमाडौं । सबै कोभिड अस्पताललाई ननकोभिड सेवा पनि सञ्चालन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिडबाहेकका अन्य सेवासमेत प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो । कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बुधबार बसेको आईसीएसको बैठकले देशका सबै कोभिड अस्पताललाई निर्णय कार्यान्वयन गराउन परिपत्रसमेत गरिसकेको छ । कोभिड अस्पताल तोकिएकाले अन्य बिरामीको उपचार गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार सबै अस्पतालले प्रदान गरिरहेका ननकोभिड सेवा सदाझैं नियमित प्रदान गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडका लागि तोकिएका अस्पतालले कोभिड र ननकोभिड सेवासमेत नियमित रूपमा प्रदान गर्न आग्रह गर्दै कोभिड र ननकोभिड अस्पताललाई परिपत्र गरेको छ ।
यस्तै, देशभर हाल २ सय २७ जना कोरोना संक्रमित आईसीयु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन् । जसअन्तर्गत १ सय ९७ जना आईसीयू र ३० जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार प्रदेश १ मा पाँच जना आईसीयूमा रहेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा ७१ जना आईसीयू र १७ जना भेन्टिलेटरमा, गण्डकी प्रदेशमा ५६ जना आईसीयू र पाँच जना भेन्टिलेटरमा, लुम्बिनी प्रदेशमा ४४ जना आईसीयू र सात जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा १४ जना आईसीयू र एक जना भेन्टिलेटरमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात जना आईसीयूमा उपचाररत रहेका छन् । यस्तै, देशभर १ हजार ६ सय ८ जना कोरोना संक्रमित होमआइसोलेसनमा रहेका छन् । सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजार १ सय ३३ जना रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने, संसदकाे सामना गर्ने
यस्तै, ३ हजार ५ सय २५ जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । प्रदेश एकमा ९७, प्रदेश २ मा ५३, बागमती प्रदेशमा ४ सय ६२, गण्डकी प्रदेशमा ३ सय ९, लुम्बिनी प्रदेशमा ४ सय १३, कर्णालीमा १५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ सय ५९ जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् ।
देशभर बुधबार ४ सय ९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६३ हजार १ सय ९३ पुगेको छ । बुधबार ६ हजार ७ सय ६ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । यससँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या १९ लाख ६४ हजार १ सय ६० पुगेको छ ।
बुधबार थप ६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । यससँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या १ हजार ८ सय ९९ पुगेको छ । हाल ३ सय ४२ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । बुधबार थप ४ सय ९५ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका भई डिस्चार्ज भएका छन् । हालसम्म नेपालमा निको हुनेको संख्या २ लाख ५६ हजार १ सय ६१ पुगेको छ ।
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - February 21, 2021
निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाही गरी छाड्छौं : मन्त्री शाह
राजधानी समाचारदाता - February 29, 2020
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले समग्रमा सुदूरपश्चिम सरकार सफल भएको दाबी गरेका छन् ।...
सुनकोशी धुसेनीमा पहिरोबाट विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
दिनेश थापा - August 31, 2020
सिन्धुपाल्चोक । सुनकोशी गाउँपालिका–५ थुम्पाखर,धुसेनीमा गएको भिषण पहिरोमा घर पुरीएकाहरुलाई घर निर्माणका लागि गाउँपालिकाले ५ लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छः महामन्त्री कोइराला
आइतबार राती गएको...
प्रदेश ३ दिनेश थापा - August 27, 2020
शिक्षक अपहरण काण्ड : विप्लवका आठ कार्यकर्ता पक्राउ
प्रदेश ३ बिमला पाण्डे - August 31, 2020
सिन्धुली । शिक्षक अपहरणका दोषी ८ जनालाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेको छ । तिनपाटन गाउँपालिका वडा नं. ८ बाहुनतिल्पुङमा रहेको भिमसेन आधारभूति विद्यालयका प्रधानाध्यापक...
ओली कार्यशैलीविरुद्ध दाहाल–नेपाल कडा रूपमा प्रस्तुत हुने
भर्खरै सुभाष शाह - December 19, 2020
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह भेलाले प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली...
Editor-Picks टेनिस रोका - July 19, 2020
समाज राजधानी समाचारदाता - May 22, 2020
सप्तरी, राजविराज । पतिको दीर्घ जिवन तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै नवविवाहित युवती देखि वृद्घा सम्मले मनाउने बटसावित्री पर्व यस पल्ट लकडाउनका कारण अधिकांशले घरमै...
राजधानी संवाददाता - February 19, 2021
टुँडिखेलमा यसरी मनाइयाे प्रजातन्त्र दिवस (फाेटाेफिचर)
सत्यन श्रेष्ठ - February 19, 2021